အထွေထွေ – Page5– My Doctor
DrMay ThantSyn	2019-03-28T10:50:43+00:00	March 28th, 2019|Categories: All Articles, အလှအပနှင့်နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံ, အထွေထွေ, အထွေထွေရောဂါများ, နေထိုင်မှုပုံစံ|
ညအခါ မိမိအတွင်းခံကို ချွတ်​အိပ်​သင့်​ မအိပ်​သင့်​ ခုလို ပူပူ​လောင်​​လောင်ေ​နွရာသီမျိုးမှာ ​ပေါ့ပါးလွတ်​လပ်​တဲ့ ဘယ်​လိုအဝတ်​​အစားမျိုး​တွေကို ​ရွေးချယ်​ ဝတ်​ဆင်​တတ်​ကြ​ဖို့ ယခင်​က ​ရေးခဲ့ပြိ်းပြီမို့.. ခုတစ်​ခါ ပူပြင်းတဲ့ ​နွေရာသီည​တွေမှာ အိပ်​စက်​ချိန်​တွင်​ မိမိအတွင်းခံဝတ်​လျက်​ အိပ်​သင့်​မအိပ်​သင့်​ ဆိုတဲ့ အ​ကြောင်း​လေး ​ပြောပြချင်​ပါတယ်​... ညအိပ်​ရာဝင်​ချိန်​မှာ တချို့က. Pajama ၊ တီရှပ်​ ၊ ပုဆိုး စသဖြင့်​ ဝတ်​ဆင်​ပြီး အိပ်​တတ်​ကြပါတယ်​.. သို့​သော်​ မိမိအတွင်းခံကို ဝတ်​လျက်​သားအိပ်​ကြသလို ချွတ်​ပြီး အိပ်​ကြတာလဲ ရှိပါတယ်​.. ဒီ​တော့ကာ ဝတ်​အိပ်​ခြင်း မအိပ်​ခြင်းရဲ့​ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုး​က ဘာ​တွေလဲ... အမျိုးသမီး​တွေအ​နေနဲ့ တ​နေကုန်​သွားလာလှုပ်​ရှာ​နေရတဲ့အတွက်​ ​ချွေး​တွေ အညစ်​အ​ကြေး​တွေ ရှိ​နေနိုင်​ပါတယ်​...အိပ်​ရာဝင်​တဲ့ အချိန်​မှာလဲ အတွင်းခံကို ဆက်​ဝတ်​ထားတဲ့အခါမှာ မိန်းမကိုယ်​တဝိုက်​ဟာ
DrMay ThantSyn	2019-03-28T10:26:43+00:00	March 28th, 2019|Categories: All Articles, အထွေထွေ, အထွေထွေရောဂါများ|
ကျောအောင့်ခြင်း ဆရာဝန်တွေအမြဲကြုံတွေ့ရတဲ့ပြဿနာ လူအတော်များများခံစားရတဲ့ဝေဒနာကတော့ ကျောပြင်အောင့်ခြင်းပါပဲ။ ဖြစ်ဖူးကြမှာပါ ကျောကအောင့်အောင့်နေတာ မသက်သာဘူး ဆေးခန်းလေးဘာလေးပြရမလား ဓါတ်မှန်ပဲပြေးရိုက်ရမလားဆိုပြီးတော့ပေါ့လေ။ ဟုတ်ပြီ ဒီတော့ကျောကဘာလို့အောင့်ရသလဲဆိုတာကို အကြောင်းအရင်းများစွာရှိတဲ့အနက် အဖြစ်များတဲ့အရာတွေကိုအဓိကပြောကြားသွားပါ့မယ်။ အောက်ပါအကြောင်းအရာများကြောင့် ကျောအောင့်နိုင်ပါတယ်- ၁။အဖြစ်များဆုံးအနေနဲ့ကတော့ ကျောပြင်ကြွက်သားများဒဏ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အလေးအပင် မ ရာတွင်ပုံစံမမှန်ခြင်း(သို့)အလေးများလွန်းခြင်း၊ကိုယ်ခန္ဓာအနေအထားမမှန်ခြင်း၊နောက်ကျောကြွက်သားများအလုပ်လွန်ကဲ၍ဝန်ပိခြင်းတို့ကြောင့် ကျောပြင်ကြွက်သားများအပေါ်ဒဏ်ပိစေနိုင်ပါတယ်။ ၂။ခါးဆစ်ရိုးများဒဏ်ဖြစ်ခြင်း၊ခါးဆစ်ရိုးအရွတ်ပြားများဒဏ်ဖြစ်ခြင်း။ခါးဆစ်ရိုးကြားအရွတ်ပြားများကျွံခြင်းမှာတော့ ကျောအောင့်ခြင်းသာမကပဲ အာရုံကြောဖိမိတဲ့အခါ ခြေထောက်တွေထုံတာကျင်တာတွေသာမက ဆီး၊ဝမ်းမထိန်းနိုင်ခြင်းတို့ပါ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ၃။အရိုးကျီးပေါင်းတက်ခြင်း။အသက်ကြီးတဲ့လူတွေနဲ့ ကာယလုပ်သားတွေမှာ ပိုဖြစ်တတ်လေ့ရှိပါတယ်။ ၄။အရိုးပွခြင်း။အသက်ကြီးတဲ့လူတွေ၊သွေးဆုံးပြီးအမျိုးသမီးတွေ၊ဆေးလိပ် အရက်သောက်သူတွေမှာ ပိုဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ ၅။အဖြစ်နည်းတာတွေအနေနဲ့ကတော့ ခါးဆစ်ရိုးကျွံခြင်း၊အရိုးတီဘီ၊ကျောရိုးဆစ်ကင်ဆာနဲ့ ကျောက်ကပ်ကျောက်တည်ခြင်း/ရောင်ခြင်းတို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျောဘယ်လိုအောင့်သလဲ... ထိုးပြီးတစ်နေရာထဲအောင့်တာ၊ဆစ်ခနဲ ဆစ်ခနဲ ဓါးလေးနဲ့ထိုးသလိုအောင့်တာ၊တစ်ခါတစ်ခါကျ ခြေထောက်တွေပါလိုက်အောင့်လာတာ၊ကျောပြင်မကွေး/လမ်းမလျှောက်နိုင်လောက်အောင် အောင့်တာ အို စုံလို့ပါပဲ။ပုံမှန်ဆိုရင်ကိုပဲ ကျောအောင့်တာက ရက်သတ္တပတ်နဲ့ကြာတတ်ပါတယ်။(၃)လထက်ကျော်ရင်တော့ နာတာရှည်ဖြစ်သွားပါပြီ။(၂)ပတ်ထက်ကျော်ပြီး မသက်သာရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့ပြသပြီး စစ်ဆေးကုသမှုခံယူသင့်ပါပြီ။ အောက်ပါအခြေအနေများထဲမှ
DrMay ThantSyn	2019-03-26T11:37:20+00:00	March 26th, 2019|Categories: All Articles, အထွေထွေ, အထွေထွေရောဂါများ|
လည်ပင်းကျီးပေါင်း မကောင်းကြောင်း 🔺 ဟိုးရှေးရှေးတုန်းကတော့ ကိုယ့်ကို လည်ပင်းဖက်ပေါင်းခဲ့ကြသူတွေက ချစ်ခင်ရတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေပေါ့။ အသက်ကလေးရလာလေ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် ဝေးသွားကြတယ်။ ရောဂါတွေကတော့ တစ်ခုပြီးတစ်ခု ရောက်လာပြီး မိတ်ဖွဲ့ကြတော့တာပဲ။ မခင်ချင်လို့မရ။ မုန်းလည်း ရှောင်လို့မရ။ လည်ပင်းကျီးပေါင်းတဲ့။ သူလည်းပါတာပေါ့။ နာမည်နဲ့ လိုက်ပဲလိုက်သေးတော့။ ကြီးမှ လည်ပင်းဖက် လာပေါင်းချင်တဲ့ စိတ်ညစ်စရာရောဂါ။ 💣 လည်ပင်းကျီးပေါင်း ဘာလို့ဖြစ်? အသက်ကြီးလာရင်ဖြစ်ပါတယ်။ လူတိုင်းနီးပါးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ တချို့တွေမှာတော့ ဘာလက္ခဏာမှ မပြဘဲ ရှိနေတတ်တယ်။ ဆေးလိပ်သောက်ရင် ပိုဖြစ်နိုင်သလို လည်ပင်း ကုပ်ပိုးနဲ့ ဇက်ကြောတွေမှာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရဖူးရင် ပိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ လည်ပင်းကနေ ခါးအောက်မြီးညှောင့်ရိုးနားအထိရှိတဲ့ ကျောရိုးဆစ်တွေတစ်လျှောက်မှာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ လည်ပင်းတစ်ဝိုက်က Cervical spine
DrMay ThantSyn	2019-03-26T10:21:33+00:00	March 26th, 2019|Categories: All Articles, အထွေထွေ, အထွေထွေရောဂါများ|
အသည်းကင်ဆာ ကြောက်စရာ ကင်ဆာဆိုတာဟာ သိပ်ကိုကြောက်စရာကောင်းပြီး ဒီဘက်ခေတ်တွေမှာ ပိုပြီးအဖြစ်များလာနေတယ်ဆိုတာ အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ ဒီထဲကမှ ဖြစ်ပွားမှုနှုန်းမြင့်တက်လာနေတဲ့ အသည်းကင်ဆာအကြောင်းကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ အသည်းကင်ဆာဆိုတာ ဘယ်နှစ်မျိုးရှိလဲ? အသည်းကင်ဆာဆိုတာမပြောခင်မှာ အသည်းမှာကင်ဆာဖြစ်ဖို့(၂)မျိုးရှိတယ်ဆိုတာ အရင်ပြောချင်ပါတယ်၊၊ အသည်းရဲ့ဆဲလ်တွေကိုယ်၌က စတဲ့ကင်ဆာနဲ့ အခြားကင်ဆာများမှကင်ဆာဆဲလ်များပြန့်နှံ့ပြီးအသည်းဆီကိုရောက်လာလို့ဖြစ်တဲ့ကင်ဆာဆိုပြီး ရှိပါတယ်။ ဒီမှာတော့ အသည်းကနေဖြစ်တဲ့ကင်ဆာ(HCC-hepatocellular carcinoma)အကြောင်းကိုပဲ ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်အရာတွေက အသည်းကင်ဆာ(HCC)ကို ဖြစ်စေသလဲ? အသည်းကင်ဆာဟာ နာတာရှည်အသည်းရောဂါတစ်ခုခုရှိနေသူတွေ(သို့)အသည်းခြောက်ပြီးသားလူတွေမှာပဲအတွေ့များပါတယ်။ဘယ်လိုရောဂါအခံရှိတဲ့လူတွေလဲဆိုရင်- ၁)အသည်းရောင်အသားဝါ ဘီပိုး/စီပိုး ရှိသူတွေ။ ၂)အရက်အလွန်အကျွံသောက်သူတွေ။ ၃)အသည်းအဆီဖုံး/ရောင် ရောဂါရှိသူတွေ(Non alcoholic fatty liver disease/Non alcoholic steatohepatitis) ၄)အဝလွန်တဲ့လူတွေနဲ့ ဆီးချိုသမားတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်နေရာတွေမှာအဖြစ်များလဲ? ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတွေနဲ့စာရင် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေမှာပိုပြီးအဖြစ်များလာပါတယ်။ဒါ့အပြင် အာရှနဲ့အာဖရိကမှာ အသည်းကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုနှုန်းဟာတရိပ်ရိပ်တက်လာနေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံအတွက်လဲ စိုးရိမ်စရာပါ၊၊
DrMay ThantSyn	2019-03-26T09:35:13+00:00	March 26th, 2019|Categories: All Articles, အထွေထွေ, အထွေထွေရောဂါများ|
အသည်းခြောက်တယ်ဆိုတာ ဘာလဲ ဘယ်လို ကုသသင့်လဲ? အသည်းခြောက်တယ်ဆိုတာဟာ အသည်းမှာရှိတဲ့ပုံမှန်ဆဲလ်တွေရဲ့နေရာမှာ အမာရွတ်တစ်သျှူးတွေနဲ့အစားထိုးခံလိုက်ရတာကိုအကြမ်းဖျဉ်းဆိုလိုပါတယ်။ အသည်းဟာရောဂါပိုး(သို့)အရက်(သို့)ဆေးဝါးအချို့(သို့)မျိုးဗီဇရောဂါတစ်ခုခုကြောင့် ဒဏ်ရာရရောင်ရမ်းပြီး ရောင်ရမ်းမှုကျသွားတဲ့အခါ ပုံမှန်ရှိနေတဲ့ကျန်းမာတဲ့ဆဲလ်တွေနေရာမှာ လုပ်ငန်းဆောင်တာကိုမထမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ အမာရွတ်တစ်သျှူးတွေ အစားထိုးဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ ဒါကိုပဲ အသည်းခြောက်တယ်ခေါ်ကြပါတယ်။ အသည်းဘာကြောင့်ခြောက်သလဲ? အောက်ပါအရာတွေကြောင့်ခြောက်ပါတယ်- အဓိကအကြောင်းအရာတွေကတော့- ၁)အရက် ၂)အသည်းရောင်အသားဝါ ဘီပိုး စီပိုး ၃)အသည်းအဆီဖုံးခြင်း(Non alcoholic fatty liver diseases,Non alcoholic steatohepatitis) တို့ဖြစ်ပြီး အဖြစ်နည်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေအနေနဲ့- ၁)မျိုးဗီဇဆိုင်ရာရောဂါများ-Haemochromatosis,Alpha1 antitrypsin deficiency,Wilson's disease ၂)ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်ဆိုင်ရာရောဂါများ-Primary biliary cirrhosis,Primary sclerosing cholangitis,Autoimmune hepatitis ၃)ဆေးဝါးများ- Amiodarone,Methyldopa,Methotrexate တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ ရောဂါလက္ခဏာတွေက ဘာတွေလဲ? ၁)မောပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း ၂)အစားအသောက်ပျက်ခြင်း၊ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်း ၃)ပျို့အန်ခြင်း၊အသားအရေများယားယံခြင်း ၄)မျက်လုံး/အသားဝါခြင်း
DrMay ThantSyn	2019-03-22T12:35:22+00:00	March 22nd, 2019|Categories: All Articles, အထွေထွေ, အထွေထွေရောဂါများ|
အရက်တစ်ခွက်သောက်လိုက်တိုင်း ကိုယ်ထဲကဘယ်လိုတုန့်ပြန်မလဲ အရက်ဟာ လူကြီးလူငယ်မရွေး၊ဆင်းရဲချမ်းသာမရွေး နှစ်ခြိုက်စွာသောက်သုံးကြတဲ့အရာပါ။အရက်အမျိုးမျိုးရှိသလို၊ အရသာအမျိုးမျိုး၊ဈေးလဲအမျိုးမျိုးရှိကြပါတယ်။ မည်သို့ပင် ကွဲပြားနေပါစေ လူ့ခန္ဓာကိုယ်မှအရက်အပေါ်တုန့်ပြန်မှုကတော့ အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့တော့ သင်အရက်တစ်ခွက်သောက်လိုက်တိုင်းမှာခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်သွားမလဲ၊ခန္ဓာကိုယ်ကရော အရက်ကိုဘယ်လိုမျိုးတုန့်ပြန်သွားမလဲဆိုတာလေး ပြောပြချင်ပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့သွေးကြောထဲမှာပျော်ဝင်နေတဲ့အရက်ပမာဏ(blood alcohol concentration - BAC )ရဲ့အကြောင်းအရင်ပြောပါမယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ BAC level ပေါ်လိုက်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တုန့်ပြန်မှုဟာ ကွဲပြားသွားလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ BAC(blood alcohol concentration) - သွေးကြောထဲမှာပျော်ဝင်နေတဲ့အရက်ပမာဏ သောက်သုံးလိုက်တဲ့အရက်အနည်းအများ၊လူတစ်ဦးတစ်ယောက်စီရဲ့မတူညီတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တုန့်ပြန်မှုတွေအပေါ်မူတည်ပြီး BAC လဲအနည်းအများကွာသွားပါတယ်၊၊ သင်အရက်သောက်လိုက်တဲ့အခါ အစာအိမ်၊အူလမ်းကြောင်းမှစုပ်ယူသွားပြီး ၎င်းမှတစ်ဆင့်သွေးကြောထဲသို့ရောက်ရှိသွားကာ တစ်ကိုယ်လုံးသို့ပြန့်နှံ့သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ သွေးကြောထဲသို့ ပျော်ဝင်ရောက်ရှိနေတဲ့အရက်ပမာဏအချိုးအစားကို BAC လို့သတ်မှတ်ပါတယ်။ နားလည်လွယ်အောင်ပြောရရင် သွေး (၁၀၀စီစီ)ထဲမှာပျော်ဝင်နေတဲ့ အရက်ပမာဏ(ဂရမ်) ကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ အရက်တစ်ခွက်သောက်လိုက်တိုင်း ကိုယ်ထဲကဘယ်လိုတုန့်ပြန်မလဲ? BAC ပေါ်မူတည်ပြီး